पछिल्लो केही वर्ष, नेटवर्क उपकरण को दायरा धेरै पटक बढेको छ किनभने किफायती मूल्य रूसी कम्प्युटर बजार मा एक मा एक सभ्य राउटर चयन, एकदम गाह्रो छ। हरेक अब र फेरि धेरै चिरपरिचित निर्माताहरु द्वारा बढुवा छन् जो नयाँ उत्पादन, धेरै छ। निर्माता TP-लिंक पनि अलग छैन उभिएर एक सभ्य आफ्नो दृष्टि प्रस्ताव गरेको छ घर को लागि राउटर र साना कार्यालय - मोडेल TL-WR1043ND। यस लेखमा पाठक को नवीनता थाह छ, र समीक्षा, परीक्षण र मालिकको समीक्षा उहाँलाई खरीद निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ।
खरीदार सही दृष्टिकोण
धेरै सम्भावित खरीदारों मुख्यतया किनभने बजार धेरै सस्ता समान वर्ग उपकरणहरू रूटर TP-लिंक TL-WR1043ND यस्तो ध्यान जित्यो किन बुझ्न, चाहन्छु। यो धेरै सरल छ: बजार अनुसन्धान सञ्चालन, निर्माता मालिकहरूको बहुमत निर्देशित महत्त्वपूर्ण कारक को एक नम्बर पहिचान भएको छ। यी आवश्यकताहरू अन्तर्गत, र एक आदर्श उपकरण विकास गरिएको छ:
आफूलाई र राउटर यसको स्थापना को सादगी लागि फर्मवेयर चयन को संभावना;
उपस्थिति हटाउन सकिने एन्टेना लाभ (धेरै खरीदारों थप महत्वपूर्ण कार्यात्मक भन्दा आफ्नो उपस्थिति);
एक तार नेटवर्क लागि गिगाबिट बन्दरगाह प्रयोग;
युएसबी-बन्दरगाह उपलब्धता (त्यहाँ छ किन हुनत धेरै खरीदारों असमर्थ व्याख्या गर्न गरिएको छ);
लागि रूसी भाषा र विस्तृत विवरण समर्थन संग लचिलो सेटिङहरू मेनु।
अगाडि पक्षमा हरियो को फिक्का रंग मा सामान्य गत्ता बक्स मा रूटर वाइफाइ TP-लिंक TL-WR1043ND को मात्र होइन छवि, र यसका सबै कार्यहरु पूर्ण विवरण समावेश गर्दछ। र, तपाईं अनुमान सक्छ रूपमा, खरीददारों राउटर लागि सबैभन्दा जरुरी आवश्यकताहरु थप विवरण र बोल्ड मा वर्णन छन्। खरिदको समय प्याकेजिङ्ग मुद्रण र आफ्नो राउटर यातायात समयमा क्षतिग्रस्त छैन भनेर पक्का गर्नुपर्छ त बाकस भित्र, यन्त्र, निश्चित छैन।
निर्माता सबै परिमार्जनहरू मा निहित मानक सुविधाहरू, यसलाई व्यावहारिक तर धेरै गरिब देखिन्छ: रूटर नै, बिजुली आपूर्ति, तीन अलग गर्न सकिने एंटेना, आधा-मीटर प्याच कर्ड, चालक र प्रचार पुस्तिका संग सीडी। फेरि एक पटक, कागज मा सुरक्षित, निर्माता सबै प्रयोगकर्ता विस्तृत परिचालन निर्देश डाउनलोड गर्न आधिकारिक वेबसाइट प्रयोग गर्न प्रदान गर्दछ। मालिकहरूको धेरै समीक्षा द्वारा न्याय, यो तरिका नेटवर्क उपकरण आवास को एक उदास दृश्य सजाउनु गर्न, कम्पनी लोगो संग पूर्ण सानो ब्रांडेड लेबल देख्न राम्रो हुनेछ।
रूप र गठन गुणस्तर
TP-लिंक राउटर धेरै वर्ष मा पहिलो पटक हो, म अर्थात् प्यानल संकेतक धेरै सूचनात्मक छ, र यो राम्रो टाढैबाट पर्याप्त देख्न सक्नुहुन्छ, उपस्थिति मा परिवर्तन गरियो। वाइफाइ नेटवर्क अगाडि प्यानल र उज्यालो हरियो स्टिकर गर्न राख्न द्रुत जडान बटन, यो समाधान थप शुरुआती प्रेस जडान सेटअप सट्टा कारखाना सेटिङहरूमा रिसेट अनुमति छैन। प्यानल सबै सूचकहरू जब राउटर काम जो धेरै सुविधाजनक छ, हस्ताक्षर गरे।
गुणस्तर कुनै उजुरी निर्माण गर्न: शरीर टिकाउ प्लास्टिक बनेको छ। चमकदार कोटिंग, तर धूलो र औंलाहरु संकलित छैन। माउन्ट एंटेना लागि कनेक्टरों बारेमा खुसी मालिकहरूमा TP-लिंक TL-WR1043ND निर्माता विशेष धन्यवाद - तामा आधार मात्र राम्रो छ एक संकेत पहुंचाता र inept कार्यहरू माउन्ट गर्नका लागि मुद्दा खोल्न अनुमति छैन।
इन्टरफेस, connectors र बोर्ड
रूटर TP-लिंक TL-WR1043ND को सुन्दर दृश्य मात्र शरीर डिजाइन कारण हो। भविष्यमा मालिक एकदम सूचनात्मक उपकरणमा सबै connectors गरे तिर निर्माता ठूलो चरण बनाएको छ। बिजुली आपूर्ति जडान इन्टरफेस हस्ताक्षर र कालो प्याड छ छ (को रिसेट बटन भ्रमित सम्भव छैन)। युएसबी पोर्ट 2.0 मानक सेतो अंकन (यूएसबी 3.0 यो नीलो छ मा) छ। इन्टरनेट जडान लागि नेटवर्क इन्टरफेस हस्ताक्षर (वान) र नीलो रंग छ। निर्माता छुट्टै जारी हब4बन्दरगाह र यसलाई पहेंलो चित्रित। सबै बन्दरगाह जो तपाईं बंदरगाह रिसेट वा IPTV कन्फिगर गर्दा धेरै सुविधाजनक छ, गनिएका छन्।
निर्माता नेटवर्क उपकरण गुणस्तर को निर्माण मा विश्व नेता छ किनभने, यन्त्र सबै मालिकहरूको लागि राम्रो संकेत - रूटर TL-WR1043ND, आधार बोर्ड र प्रोसेसर सहित सबै उपकरणहरू Atheros चिप आधारित छन्। कैबिनेट मा सबै उपकरणहरू सुरक्षित प्रणाली बोर्ड गर्न soldered छन्। यो एक राउटर परिवहन गर्दा केही घचघच्याउनुहुन्छ र एक्स्ट्रानिअस ध्वनि प्रकाशित।
सभ्य कार्यक्षमता रूटर TL-WR1043ND
TL-WR1043ND उपकरण बजेट वर्ग (4000 rubles को मूल्य) मा छैन अवस्थित छ भएकोले यसको कार्यात्मक संभावित खरीदारों लागि आवश्यकताहरु एकदम उच्च हो। त्यसपछि निर्माता TP-लिंक प्रयास र नेटवर्क उपकरण को बजार मा सबै अवस्थित प्रविधिहरू आफ्नो राउटर प्रदान।
Wan-जडान दुनिया (को पाठ्यक्रम, बीलाईन एक जटिल मिश्रण यसलाई उठयो) मा कुनै पनि प्रदायकलाई बुझे गर्न सकिन्छ।
राउटर मोड र पहुँच बिन्दु कार्यालय मा वायरलेस नेटवर्किंग (ग्राहक सूची, ठेगाना को आरक्षण सेवा दायरा, र प्रणाली प्रशासक लागि समान कार्यहरु) को लागि उपयोगी छ जो आफ्नो सेटिङहरू, छ।
पोर्ट फर्वार्ड मात्र होइन UPnP को स्तर मा छ। त्यहाँ demilitarized क्षेत्र, भर्चुअल सर्भर र अन्य यातायात पुन: निर्देशन।
हार्डवेयर स्तर (पिपिटिपि, L2TP, ESP हेडर साथ IPSec) मा लागू भर्चुअल निजी नेटवर्क को लागि समर्थन।
निर्मित हार्डवेयर मा फायरवाल राउटर TL-WR1043ND फिल्टर (आईपी म्याक वा डोमेन), SPI र पनि dos, सम्पूर्ण स्थानीय नेटवर्क सिर्जना राउटर पहुँच नियन्त्रण रक्षा गर्न सक्षम छ।
फर्मवेयर लागि आवश्यकता
सुरुमा, यन्त्र सेटिङ कम्तिमा र मा त्यहाँ कार्यहरु को कुनै विवरण छ जसमा आधारभूत फर्मवेयर, आउँछ। तर, निर्माता कडा आधिकारिक वेबसाइट र राउटर मोडेल TL-WR1043ND लागि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सुझाव दिन्छ। फर्मवेयर व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा प्रयोगकर्ता चयन गरिएको छ। धेरै प्रशासकहरूले रूसी प्रयोगकर्ताहरूको लागि पूर्ण संस्करण डाउनलोड गर्न सुझाव दिन्छौं। हो, शुरुआती लागि धेरै अनावश्यक कार्य हो, तर कम्तिमा ठीक-मिलाउने लागि उपयोगी छ जो प्रत्येक वस्तु, एक विस्तृत विवरण छ।
सेवा प्रदायक धेरै मा आफ्नो वेभसाइटमा आफ्नो सर्भर जडान गर्न डिजाइन जो तयार फर्मवेयर, प्रस्ताव भूल छैन। यो निर्णय निकै सेवा प्रदायकको नेटवर्क मा काम सुविधा हुनेछ। रूटर मात्र फर्मवेयर अद्यावधिक समर्थन छैन, र हार्डवेयर र इन्टरफेस केबल USB-COM मार्फत घनघोर सफ्टवेयर (प्रशासन को क्षेत्र मा पुटीन कार्यक्रम र ज्ञान आवश्यक)।
सादगी र सेटअप सजिलो
लागि रूटर TL-WR1043ND दुई तरिकामा सेट जडान सम्भव: जडान विजार्ड प्रयोग र नियन्त्रण प्यानल प्रयोग tweaking। वेब इन्टरफेस (ठेगाना, प्रयोगकर्ता नाम र बाडे को तल मा स्थित छ कि राउटर को लेबल मा दर्ता पासवर्ड) प्रयोग गरेर राउटर को इन्टरफेस पहुँच। पहिलो प्रवेश गर्दा प्रयोगकर्ता प्रशासक खाताको लागि पासवर्ड परिवर्तन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ। कि पछि, वहाँ एक कन्फिगरेसनविजार्ड एन्क्रिप्शन मानक चयन गर्नुहोस्, वायरलेस इन्टरफेस को नाम निर्दिष्ट गर्न, र Wi-Fi को लागि एक पासवर्ड सेट संकेत छ।
मालिक ठीक-धुन गर्न राउटर रुचि भने, त्यसपछि मास्टर सेवाहरू आवश्यक इन्कार र «वायरलेस» मेनुमा जानुहोस् छ। विस्तृत कार्यात्मक वर्णन, जो तपाईं इन्टरफेस को सही पक्षमा चाँडै सेटिङ सामना गर्नेछ देख्न सक्नुहुन्छ। इच्छित भने, तपाईं निर्माता को आधिकारिक साइटबाट पूरा प्रयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड गर्न सक्छन्, यो निकै सबै एकाइ मालिकहरूको कार्य सुविधा जो, सबै सेटिङ TL-WR1043ND को विस्तृत वर्णन एक तयार बनाएको उदाहरण छन्।
रूटर सेटअप गर्दा समस्या समाधान
आधिकारिक वेबसाइटमा निर्माता द्वारा आपूर्ति सफ्टवेयर केही संस्करण सही राउटर TL-WR1043ND मा मुद्रण सर्भर को काम समर्थन। मिडिया मा मालिक को समीक्षा विश्वव्यापी समाधान सिफारिस:
मुद्रक स्थानीय डेस्कटप या नोटबुक कम्प्युटरमा जडान र चालक स्थापना;
एक वायरलेस पहुँच बिन्दु गर्न मुद्रक जडान;
जडान मुद्रकमा बाध्यकारी आईपी-ठेगाना निर्दिष्ट;
नेटवर्क उपकरणको रूपमा एक पीसी वा ल्यापटप कम्प्युटरमा मुद्रक जडान गर्नुहोस्।
यो प्रिन्टर पनि राउटर एक रिबुट पछि 100% प्रदर्शन प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। तथापि, फोन, ट्याब्लेट र अन्य वायरलेस उपकरणहरू मुद्रण अझै पनि सीमित हुनेछ।
धेरै मालिक एक वायरलेस च्यानल डाटा को ठूलो रकम स्थानान्तरणका जब TP-लिंक राउटर अक्सर लटकी कि दाबी गर्छन्। तात्दै कुनै एक उपकरण बीमा छैन, त्यसैले यो हीटर टाढा राम्ररी ventilated क्षेत्रमा राउटर राख्न सिफारिस गरिएको छ।
सर्वेक्षण शो रूपमा, TL-WR1043ND वायरलेस उपकरण, रूसी बजार मा 4,000 rubles भन्दा बढी गर्छ जो मूल्य सबै खरिदकर्ताहरूको लागि एकदम एक रोचक समाधान छ। विशाल कार्यक्षमता, सेटअप र उल्लेखनीय उपस्थिति सजिलो धेरै प्रयोगकर्ताहरू को ध्यान आकर्षित गर्न सक्छन्। मालिक को समीक्षा द्वारा न्याय, रूटर मा कमीकमजोरी छन्, तर तिनीहरू विशेष महत्वपूर्ण छैन। केवल एक निष्कर्ष: यो जो, मूल्य र गुणस्तर को मामला मा, हामी सबै संभावित खरीदारों गर्न सिफारिश गर्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो routers, को छ।
किन ल्याप्टप शीतल प्याड
लेजर प्रिन्टर म किन्न गर्नुपर्छ?
ASUS Z87M-प्लस: समीक्षा र प्रशंसापत्र
मोडेम "मेगाफन" 4G - समीक्षा। 4G मोडेम "मेगाफन" को लागि एन्टेना
उत्पादन र इनपुट उपकरणहरू। आधारभूत इनपुट / आउटपुट जानकारी
अडियो-Technica (हेडफोन): समीक्षा
बाल अभिभावकको हेरविचार बिना बायाँ - यो हुनुहुन्छ? अधिकार र छोराछोरीको सुरक्षा अभिभावकको हेरविचार बिना बाँकी
सक्रिय आराम! पानी पार्क संग ग्रीस होटल
Arachnoid सानो ट्युमर र यसको उपचार
संकुचित रूपमा सुटकेश मा प्याक गर्न? सबै फिट एक सुटकेश कसरी प्याक गर्न?
Bagdasarov Mihail Sergeevich - अभिनेता: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, चलचित्र
मस्तिष्क को खैरो र सेतो कुरा
Carboxytherapy: समीक्षा। कस्मेटिक अनुहार उपचार
मेरो मनपर्ने केक: जाम संग केक
Dzhon Galyano: अत्तर। अत्तर यूहन्ना Galliano को: समीक्षा
Shadowfang वाह जहाँ राख्नुहोस् छ?